Ihe mgbochi mmiri: Gịnị bụ Page njikọ Ngwá Ọrụ Nchapu. 3 Akụkụ dị iche iche nke Nke a na-ese foto
Page njikọ Ngwá ngwugwu na-ekpuchi koodu HTML nke saịtị ma wepụ njikọ sitere na ibe weebụ. Ozugbo a kpochapụrụ data ahụ, ọ na-egosiputa njikọ dịka ederede ma mee ka ọrụ anyị dị mfe. Nke a ntanetị ntanetị ọ bụghị naanị maka njikọ nke ụlọ ma gosipụtara njikọ ndị dịpụrụ adịpụ ma gbanwee data n'ime ụdị mpempe akwụkwọ. Ngwakọta njikọ bụ ụzọ dị mfe ịchọta ngwa dịgasị iche iche, weebụsaịtị, na teknụzụ na weebụ. Ebumnuche nke Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Page bụ iji kpochapụ ozi site na saịtị dị iche iche. A na-ewu ya site na ngwa ngwa ngwa ngwa na ngwa ngwa nke aha ya bụ Lynx ma kwekọọ na usoro sistemụ niile - retread tires wiki. A na-eji Lynx eme ihe maka ule na nyocha nsogbu weebụ site na akara iwu. Ngwakọta nke njikọ njikọ bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke e mepụtara na 1992. Ọ na-eji usoro iwu Ịntanetị gụnyere WAIS, Gopher, HTTP, FTP, NNTP, na HTTPS iji nweta ọrụ gị.
Atụmatụ atọ nke ngwá ọrụ ahụ:
1. Data ntanetị na Njikota otutu:
Iji njikọta njikọ ngwaọrụ , ịnwere ike ihichapụ ma ọ bụ wepụ data na ọtụtụ eri. Ndị odeakwụkwọ nkịtị na-ewe oge iji rụọ ọrụ ha, mana ngwá ọrụ a na-eme ọtụtụ ihe iji chọgharịa ruo 30 ibe weebụ n'otu oge ahụ ma ghara ịla oge gị na ume gị.
2. Wepụ data site na ebe nrụọrụ weebụ dị omimi:
Ụfọdụ saịtị dị ike na-eji usoro ntinye data iji mepụta arịrịọ dịka AJAX. Ya mere, ọ siri ike maka onye nkịtị nchịkọta weebụ wepụ data site na saịtị ndị ahụ. Page njikọ Ngwa Ngwá Ọrụ, Otú ọ dị, nwere atụmatụ dị ike ma na-enye ndị ọrụ ohere iwepụta data sitere na saịtị ndị bụ isi ma dị ike. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a nwere ike wepụ ihe ọmụma si na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi ma nwee ọrụ dị mma iji zere njehie 303.
3. Ozi Ọpụpụ na Usoro ọ bụla:
Page njikọ Ngwa Ngwá Ọrụ na-akwado ụdị dị iche iche ma na-ebupụ data na ụdị nke MySQL, HTML, XML, Access, CSV, na JSON. I nwekwara ike idetuo na kpochapụ ihe ndị a n'ime Akwụkwọ Okwu ma ọ bụ wepu faịlụ ndị a kpọpụtara na draịvụ ike gị. Ọ bụrụ na ị gbanwee ntọala ya, ngwa ọrụ nke na-ekpuchi akwụkwọ ga-ebudata data gị na diski ike gị na-akpaghị aka na usoro a kọwapụtara. Ị nwere ike iji data a na-abanyeghị ma nwee ike melite arụmọrụ nke saịtị gị ruo n'ókè.
Otu esi eji ngwá ọrụ a?
Naanị ị ga-abanye URL ma kwe ka ngwá ọrụ a rụọ ọrụ ya. Ọ ga-ebu ụzọ nyochaa HTML ma wepụ data maka gị dabere na ntuziaka gị na ihe ndị ị chọrọ. A na-egosipụtakwa ihe ndị a n'ụdị ndepụta. Ozugbo a kpochapụrụ njikọ, akara ngosi ga-egosipụta n'akụkụ aka ekpe. Ọ bụrụ na ịnata ozi "Ọ dịghị Njikọ Hụpụtara" ọ nwere ike ịbụ n'ihi na URL ahụ ị banyere abanyeghị. Jide n'aka na i tinyela URL ozugbo iji wepụ njikọ sitere. Ọ bụrụ na ịnweghị ike iwepụ aka na aka, nhọrọ ọzọ bụ iji API. A na-eji API eji ejiji ad-hoc ma na-ejiri ọtụtụ narị ajụjụ kwa elekere maka ndị ọrụ.